MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်
by Ven Ravika
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ၂၀၀၈-ခုဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်ခံပြီး ယင်းဥပဒေဘောင်မှ ဒီမိုကရေစီခရီးကို ချီတက်သွားဖို့ အတိုက်အခံများနှင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များကို စည်းရုံးသွား မည်ဟု ဆိုသည်။ သမ္မတသက်တမ်း(၂)နှစ်အတွင်းမှာ အတိုက်အခံအား လုံးနီးပါးသည် ၂၀၀၈-ဥပဒေအရိပ်အောက်ကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်၍ အောင်မြင်မှုရနေသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ကျန်အတိုက်အခံအနည်းငယ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကို ဆက်ပြီး စည်းရုံးသွားဖို့ ရှိသည်။ သို့သော် သမ္မတဦးသိန်စိန်၏ အချစ်လမ်းကြောင်းမှာ ကချင်က ကျွန်းခံနေသည်။ တိုင်းရင်းသားများသာ ၂၀၀၈-ခုဥပဒေကို လက်ခံခဲ့လျှင် တစ်မတ်သားဖက်ဒရယ်ကို ပေးရန်ရှိပြီး ၂၀၁၅-ခုနောက်ပိုင်းတွင် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ဖို့ လိုလားဟန်ရှိသည်။
ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်အနေဖြင့် ကျားကျားလျားလျား ဖြစ်အောင် စစ်ပွဲတစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲလိုသူဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲကို
ညှိုနှိုင်းခြင်းဖြင့် အောင်နိုင် လျှင် စစ်ရှုံးသည်ဟု မြန်မာ့တပ်မတော်က မှတ်ယူလေ့ရှိသည်။ တပ်မ တော် သမိုင်းမှာ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး အတင်းအကြပ် လက်ခံခိုင်း သည်သာ ရှိဖူးသည်။ ဤအစဉ်အလာကို ပယ်စွန့်ရန် အဆင်သင့်မဖြစ် သေးပါ။ ထို့ပြင် ကာလုံအစည်းအဝေးတွင် သူက အခရာကျပြီး အစိုးရ အဖွဲ့တွင်လည်း ဝန်ကြီးဌာန(၃)ခုကို ချုပ်ကိုင်ကာ လွှတ်တော်၌လည်း လေးပုံတစ်ပုံရထားသဖြင့် မာန်ဖီ၍ ရသည်။ ကချင်မှ လွဲ၍ အခြားပြည် နယ်များတွင် စစ်အစိုးရတပ်စခန်းများက တိုင်းရင်းသားများ၏ ဗဟိုဌာန ချုပ်အသီးသီးနားသို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့ပြီဖြစ်၍ ကေအိုင်အေနှင့် ကေအိုင်အို ကိုလည်း အလားတူ လက်လှမ်းမီသည့်နေရာတွင် ထားချင်သည်။ သို့မှသာ သူ့ဝန်ကြီးဌာန(၃)ခုက ကချင်ပြည်နယ်အပါအဝင် ပြည်နယ် တိုင်းမှာ ခြယ်လှယ်၍ ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ရရှိလာသည့် အသက်အရွယ်ကိုလည်း ထောက်ရသည်၊ မိမိလမ်းစဉ်ဖြစ်သည့် အကြမ်းမဖက် ပြုပြင်ပြောင်းရေး မူဝါဒ ထိခိုက်မည်ကိုလည်း စိုးရိမ်နေရသည်။ ထို့ထက် အရေးကြီး သည်မှာ ၂၀၁၅-ခုနောက်ပိုင်းတွင် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ သမ္မတကြီးသာ ဖြစ်ချင်သည်မဟုတ်ဘဲ စစ်တပ်၊ ဦးပိုင်နှင့် ခရိုနီများ၏ သမ္မတကြီးဖြစ်ဖို့လည်း လိုအပ်ကြောင်း နားလည်သည်။ ဤထက်မက အမေရိကန်နှင့် အနောက်တိုင်းနိုင်ငံ များနှင့် နီးစပ်သူဟု နာမည်ကြီးသည့် လူထုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ် သည်နှင့်အညီ တရုတ်၊ အိန္ဒိယတို့နှင့် ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်နေဖို့လည်း လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်သမျှအရေးတွင် တိုက်ရိုက်မပါဝင်ဘဲ လွှတ်တော်လုပ်ငန်းတွင်သာ Low Profile အနေဖြင့် စိတ်ကို နှစ်ပြီး ရိုးရိုးကျင့်မြင့်မြင့်ကြံနေလိုဟန်ရှိသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် အစိုးရကို မငြိုငြင်စေဘဲ ကျောထောက်နောက်ခံကောင်းရန် အားမွေးနေသည်။
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်အနေဖြင့် လက်ရှိ ၂၀၀၈-ခု ဥပဒေကို အခြားအတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များလိုပင် လက်မခံလိုပါ။ လူမှုနိုင်ငံရေးလုပ်ပြီး အနာဂတ် ထောင့်တိုင်များကို တည်ဆောက်ပေးရန် ကြိုးစားချင်သည်။ မိမိအနာဂတ် အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရေးအတွက် အဓိက နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်တွင် နေရာယူကာ သေချာအောင် လုပ်ထား၍ ရသော်လည်း လက်ရှိအစိုးရခင်းကျင်းသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်ကို သံသယမကင်း ရှိသည့်အတွက် အခန့်မသင့်လျှင် ပြန်ရုန်းထဖို့ back-up အနေဖြင့် အသင့်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေသည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကချင်မှ လွဲ၍ စစ်ရေးကို လှုပ်ရှားရန် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးကြောင်း ယူဆသည်။ မလွဲမရှောင်သာ ကိစ္စမှ လွဲ၍ စစ်ကို မတိုက်ချင်ကြသေးပါ။ သို့သော် ကချင်အပေါ် အစိုးရဆက်ဆံပုံကို စောင့်ကြည့်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် သူတို့က အပစ်ကို ရပ်ပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးချင်ကြသည်။ ကချင်တွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသော်လည်း ကေအိုင်အိုက နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို အမိအဖွဲ့ဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ညီညွတ်ရေးဖက်ဒရယ်ကောင်စီအနေဖြင့် ပါဝင်ရန် ရှိသဖြင့် အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ U.N.F.C. မဟုတ်သော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း နည်းတူ အဆင်သင့်ဖြစ် နေကြပါပြီ။ ဤတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများသည် ၂၀၀၈-ခုဥပဒေကို လက်ခံပြီး နိုင်ငံရေး ပါတီကို ထောင်၊ လွှတ်ကို ဝင်ရန် ဆန္ဒ မရှိကြပါ။ ၂၀၀၈-ခုဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေးပြီး စစ်မှန်သည့် ဖက်ဒရယ် စနစ်ကို ခြွင်းချက်မရှိ အစိုးရဘက်မှ ကမ်းလှမ်းမှသာ စဉ်းစားကြဖွယ် ရှိသည်။
၁။ အစိုးရ၊ အတိုက်အခံ၊ တိုင်းရင်းသားများကို တွေဝေစေပြီး စစ်တပ်က နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်နေသည်။ အစိုးရက စစ်တပ်နှင့် ကြံရာပါဖြစ်နိုင် သည်။
၂။ အကြီးစားပြင်ဆင်မှုများ လုပ်စရာမလိုဘဲ ၂၀၀၈-ခုဥပဒေကို တိုင်းရင်း သားများလက်ခံကြလျှင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ mission အောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီမစ်ရှင်ကို ၂၀၁၅ မတိုင်မီ အောင်မြင်အောင် လုပ်မည်ဖြစ်သည်။၂၀၁၅ ခုနောက်ပိုင်းကို သူတာဝန်ခံရန် မလို။
၃။ ၂၀၁၅ -ခုမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အာဏာရလာခဲ့လျှင် ပြည်ပရေးရာ၌သာ လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး တပ်မတော်က ပြည်တွင်းရေးကို ခြယ်လှယ်နေဦးမည်ဖြစ်ရာ စစ်တပ်ကို အောက်ကျို့ပြီး ဆက်ဆံခြင်းပြုနိုင်မပြုနိုင် ဆုံးဖြတ်ရမည်မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး များ ဖြစ်သည်။
စစ်တပ်က နောက်မဆုတ်ဘဲ လက်ရှိပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မျှော်လင့် ချက်များစွာ ထား၍ မရပါ။ စစ်တပ်ကလည်း (၂၀၃၅)ခုနှစ်အထိ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးကို ဦးဆောင်ရန် ပိုင်းဖြတ်ထားသဖြင့် အတိုက်အခံများနှင့် တိုင်း ရင်းသားများက သူတို့ကို ဖိအားပေးမည်လား၊ မိမိတို့သာ လုံးပါးပါး ကုန်မည်လား ယနေ့ရွေးချယ်သည့်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လုံးဝတည်မှီ နေသည်။
at 1/23/2013 06:39:00 PM
very good, article. carry on. thank.